रंगशाला विवादः स्थानीयले भने– धुर्मुसको पनि गल्ती छ पर्खाल भत्किनुमा, के अब बन्दैन रंगशाला ? (हेर्नुहोस् भिडियो) — ''समर्पण मिडिया''
रंगशाला विवादः स्थानीयले भने– धुर्मुसको पनि गल्ती छ पर्खाल भत्किनुमा, के अब बन्दैन रंगशाला ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
१७, जेठ २०७६
चितवन । चितवनको रामपुरमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको विवादबारे स्थानीयले मुख खोलेका छन् । बन्दै गरेको रंगशालाको पर्खाल भत्काइएपछि अहिले काम ठप्प छ । बाटोको विवाद नसुल्झिँदै धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले रंगशाला निर्माणस्थलमा पर्खाल लगाउँदा असन्तुष्ट पक्षले जस्तापाताको पर्खाल भत्काइदिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
पछिल्लो ६ महिनादेखि बाटोको विवाद समाधान गर्न ताकेता गरेपनि फाउण्डेशनले वेवास्ता गर्दा पर्खालमा डोजर चलेको केही स्थानीयले बताए । ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनको पनि गल्ती छ, बाटोको विवाद समाधान नगरी काम अगाडि बढाउनु हुँदैनथ्यो’, स्थानीय विष्णु अधिकारीले भने ।
अर्का स्थानीय गौरिश्वर कडेंलले रंगशालाको पर्खाल भत्काउने काम निन्दनीय भएको बताए । रंगशाला निर्माण हुँदा रामपुरका स्थानीयलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा हुनेहँदा सानातिना कुरामा अवरोध पुर्याउन नहुने बताए । ‘डोजर लगाएर पर्खाल भत्काउनेहरु पापी हुन्, तिनलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ’, उनले भने । रंगशाला निर्माणमा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई आफूहरुको पूर्ण साथ र सहयोग रहने उनीहरु बताउँछन् ।
सारेगामापामा तेश्रो बनेका प्रितम आचार्यलाई यसरि गरियो नेपालमा भब्य स्वागत ( भिडियो सहित)